ပထမဆုံးသည်နောက်ဆုံးဖြစ်သင့်သည် - Worldwide Church of God Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2018-01 > ပထမဦးဆုံးနောက်ဆုံးရကြလိမ့်မည်
သမ္မာကျမ်းစာကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုသောအခါ ယေရှုပြောသမျှကို နားလည်ရန် ရုန်းကန်ရတတ်ပါသည်။ မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း၌ အဖန်ဖန် ပေါ်လာသော မိန့်ဆိုချက်ကို “အဦးဆုံးသောသူမူကား နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်၊ နောက်ဆုံးသောသူသည် အရင်ဖြစ်လိမ့်မည်” (မဿဲ ၁။9,30).
ယေရှုသည်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း၏စည်းမျဉ်းများကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်၊ ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုဖျက်သိမ်းရန်နှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားသည်။ ပထမရာစုရှိပါလက်စတိုင်းရှိဂျူးများသည်သမ္မာကျမ်းစာနှင့်အလွန်ရင်းနှီးကြသည်။ ကျောင်းသားများသည်ယေရှုနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းမှစိတ်ရှုပ်ထွေးလာပြီးစိတ်ဆိုးလာပြန်သည်။ သူ့အတွက်ယေရှု၏စကားများသည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်အတူတကွမလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ။ ထိုစဉ်ကရဗ္ဗိများသည်သူတို့၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုအလွန်တန်ဖိုးထားခဲ့ကြသည်၊ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်ထံမှကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားလူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးလှေကားထဲမှာ "ပထမ ဦး ဆုံး" အကြားခဲ့ကြသည်။
နောက်တစ်ကြိမ်တွင်၊ ယေရှုက သူ၏နားနာသူများကို ဤသို့မိန့်တော်မူခဲ့သည်– “အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်မှစ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ရှိ ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကို သင်တို့သည်မြင်သောအခါ ငိုကြွေးလျက် အံသွားခဲကြိတ်ကြလိမ့်မည်။ အရှေ့၊ အနောက်၊ မြောက်၊ တောင်မှလာ၍၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ စားပွဲ၌ ထိုင်ကြလိမ့်မည်။ ရှုလော့၊ နောက်ဆုံးဖြစ်လတံ့သော အရာလည်း ရှိသေးသည်။ ရှေ့ဦးစွာသောသူတို့သည် နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။” (လုကာ ၁၃း၂၈-၃၀)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းမှုဖြင့် ယေရှု၏မိခင် မာရိသည် သူ၏ဝမ်းကွဲဖြစ်သူ အဲလိဇဘက်အား ဤသို့ဆိုခဲ့သည်– “အားကြီးသောလက်ရုံးဖြင့် တန်ခိုးကိုပြတော်မူ၏။ မာနထောင်လွှားသော စိတ်နှလုံးကို အရပ်လေးမျက်နှာသို့ ကွဲပြားစေတော်မူ၏။ အားကြီးသောသူတို့ကို ရာထူးချ၍ နှိမ့်ချသောသူတို့ကို ချီးမြှောက်တော်မူ၏။” (လု 1,51-52 NGÜ)။ မာနသည် အပြစ်များစာရင်းတွင်ပါရှိပြီး ဘုရားသခင်သည် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း ဤနေရာတွင် သဲလွန်စတစ်ခု ရှိသည် (သု. 6,16-19) ။
အသင်းတော်၏ပထမရာစုတွင်၊ တမန်တော်ပေါလုသည် ဤပြောင်းပြန်အစီအစဉ်ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ လူမှုရေးအရ၊ နိုင်ငံရေးအရ၊ ဘာသာရေးအရ ပေါလုသည် "ပထမ" တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် အထင်ကြီးစရာကောင်းသော မျိုးရိုး၏အခွင့်ထူးဖြင့် ရောမနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ “ဣသရေလအမျိုး၊ ဗင်္ယာမိန်အနွယ်၊ ဟေဗြဲလူ၊ ဖာရိရှဲ ပညတ်တရားအရ အဋ္ဌမနေ့၌ အရေဖျားလှီးခြင်းကို ငါခံရ၏” (ဖိလိပ္ပိ၊ 3,5).
ပေါလုသည် အခြားသောတမန်တော်များသည် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား ဓမ္မအမှုဆောင်များဖြစ်ချိန်၌ ခရစ်တော်၏ဓမ္မအမှုကို ခံရသည်။ သူသည် ကောရိန္သုမြို့သားများထံ စာရေး၍ ပရောဖက်ဟေရှာယကို ကိုးကားခဲ့သည်– “ပညာရှိသောသူ၏ပညာကို ငါဖျက်ဆီးမည်။ ဥာဏ်ပညာကို ငါပယ်ရှားမည်။ လောက၌ အားနည်းသောအရာကို ဘုရားသခင်သည် အရှက်ခွဲရန် ရွေးချယ်တော်မူ၏။1. ကောရိန္သု 1,19 နှင့် ၁၄)။
ရှင်ပြန်ထမြောက်သောခရစ်တော်သည်ပေတရုကိုအခြားအချိန် ၅၀၀၊ ထို့နောက်ယာကုပ်နှင့်အခြားသောတမန်တော်များထံတွင်ကိုယ်ကိုပြပြီးနောက်သူသည်“ အချိန်မတန်ဘဲမွေးဖွားခြင်းအဖြစ်” ကိုယ်ကိုထင်ရှားပြခဲ့သည်။ နောက်ထပ်သဲလွန်စ? အားနည်းသောသူနှင့်မိုက်သောသူတို့သည်ပညာရှိသောသူကို၎င်း၊
ဘုရားသခင်သည်အစ္စရေးသမိုင်းတွင်တိုက်ရိုက်ကြား ၀ င်ခဲ့ပြီးမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Jacobသောသည်သား ဦး ဖြစ်သော်လည်းယာကုပ်သည်သား ဦး အရာကိုအမွေရခဲ့သည်။ Abraham ရှမေလသည်အာဗြဟံ၏သား ဦး ဖြစ်သော်လည်းသား ဦး အရာကို the ဇာက်အားပေးခဲ့သည်။ ယာကုပ်သည်ယောသပ်၏သားနှစ်ယောက်ကိုကောင်းကြီး ပေး၍ မနာရှေကိုလက်မခံဘဲသားငယ် E ဖရိမ်ကိုလက်စွဲ။ ၊ သရေလနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးဘုရင်ရှောလုသည်လူတို့ကိုအုပ်ချုပ်စဉ်ဘုရားသခင်အားနာခံရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ယေရှဲ၏သားတယောက်ဖြစ်သတည်း။ ဒါဝိဒ်သည်လယ်ပြင်၌သိုးများကိုထိန်းနေစဉ်ဘိသိက်ပေးရေးတွင်ပါဝင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခံရသည်။ အသက်အငယ်ဆုံးအနေနှင့်သူသည်ရာထူးအတွက်လျာထားခံထိုက်သူမဟုတ်ပါ။ ဤတွင်လည်းအခြားအရေးကြီးသောညီအစ်ကိုများအားလုံးထက်“ ဘုရားသခင့်စိတ်တော်နှင့်တွေ့သောသူ” ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ယေရှုသည် ပညတ္တိကျမ်းဆရာများနှင့် ဖာရိရှဲများအကြောင်း များစွာပြောခဲ့သည်။ မဿဲ အခန်းကြီး ၂၃ ၏ တစ်ခုလုံးနီးပါးကို ၎င်းတို့အတွက် ရည်စူးထားသည်။ တရားဇရပ်ရှိ အကောင်းဆုံး ထိုင်ခုံများကို နှစ်သက်ကြပြီး ဈေးရင်ပြင်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်ကို နှစ်သက်ကြပြီး လူများက ရဗ္ဗိဟုခေါ်ကြသည်။ အများသူငှာ ခွင့်ပြုချက်ရရန် အားလုံးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသော အပြောင်းအလဲတစ်ခု မကြာမီ ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်။ “ယေရုရှလင်မြို့၊ ယေရုရှလင်မြို့…၊ ကြက်မသည် သူ့သားလေးများကို အတောင်အောက်၌ စုရုံးသကဲ့သို့၊ မင်းမလုပ်ချင်ဘူး! သင်၏အိမ်သည် သင်၌ လူဆိတ်ညံလျက်ရှိလိမ့်မည်။” (မဿဲ ၂3,37-38) ။
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ သူသည်ဘုရင်တို့ကိုရာဇပလ္လင်ပေါ်မှ ချ၍ နှိမ့်ချသောသူတို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူသဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှမည်သည့်ကောင်းချီးများနှင့်လက်ဆောင်များကိုရရှိသည်ဖြစ်စေမိမိကိုယ်ကိုဝါကြွားရန်မလိုအပ်ပါ။ မာနသည်စာတန်၏ကျဆုံးခြင်း၏အစကိုမှတ်သားဖော်ပြခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လူသားများအတွက်သေစေသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချုပ်ကိုင်ထားသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်နှင့်သဘောထားကိုတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲစေသည်။
သူပြောတာကို နားထောင်နေတဲ့ ဖာရိရှဲတွေက ယေရှုကို နတ်ဆိုးမင်း ဗေလဇေဗုလအမည်နဲ့ နတ်ဆိုးတွေ နှင်ထုတ်တယ်လို့ စွပ်စွဲကြတယ်။ သခင်ယေရှုက စိတ်ဝင်တစားပြောဆိုခဲ့သည်– “လူသားကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ ပြောဆိုသောသူမည်သည်ကား၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ပြစ်မှားသောသူမည်သည်ကား၊ ဤလောက၌ဖြစ်စေ၊ နောင်လောက၌ဖြစ်စေ အပြစ်လွှတ်ခြင်းသို့မရောက်” (မဿဲ ၁။2,32).
၎င်းသည်ဖာရိရှဲများကိုနောက်ဆုံးတရားစီရင်ချက်နှင့်တူသည်။ သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောအံ့ဖွယ်အမျက်မြင်ကြပြီ။ သူသည်တကယ့်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပင်ယေရှုထံမှထွက်သွားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူတို့ကသူ့ကိုနိမိတ်လက္ခဏာတောင်းခဲ့တယ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားခြင်းလော။ သူတို့အတွက်ခွင့်လွှတ်မှုရနိုင်သေးသလား။ မာနသည်မာန်မာနကြီးသော်လည်းယေရှုကို ချစ်၍ နောင်တရစေလိုသည်။
အမြဲလိုလို၊ ခြွင်းချက်ရှိတယ်။ နိကောဒင်သည် ညအချိန်၌ ယေရှုထံသို့လာ၍ ပို၍နားလည်လိုသော်လည်း စံဟီဒရင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း (ယောဟန်၊ 3,1) နောက်ပိုင်းတွင် သူသည် ယေရှု၏အလောင်းကို သင်္ချိုင်းဂူထဲတွင် ထည့်ထားသောအခါ အရိမတေမြို့မှ ယောသပ်နှင့်အတူ လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ဂါမလျေလသည် ဖာရိရှဲများအား တမန်တော်များ၏ ဟောပြောခြင်းကို မဆန့်ကျင်ရန် သတိပေးခဲ့သည်။ (တ 5,34).
ဗျာ ၂၀း၁၁ တွင်ကြီးကျယ်သောပလ္လင်ဖြူရှေ့တွင်သခင်ယေရှုက“ ကျန်လူသေများ” ကိုစီရင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစီရင်ချက်အကြောင်းဖတ်ရသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်သောယေရှုကိုသူအမှန်တကယ်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းထိုအချိန်ကသူတို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်း၏“ ပထမဆုံး” "သရေလထင်ရှားသောteachersသရေလဆရာများကနောက်ဆုံးတွင်မြင်တွေ့နိုင်မည်လော။ ဒါကပိုကောင်းတဲ့ "နိမိတ်လက္ခဏာ" ပါတကား!
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သူတို့ကိုယ်သူတို့ နိုင်ငံတော်မှ ဖယ်ထုတ်ခံရသည်။ အရှေ့တိုင်းသားတွေနဲ့ အနောက်တိုင်းက နှိမ့်ချတဲ့လူတွေကို သူတို့မြင်တယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကို သိရှိခြင်း၏အကျိုးကို မခံစားဖူးသောလူများသည် ယခု ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏ပွဲကြီးတွင် လျောင်းနေကြသည် (လုကာ ၁ ကော၊3,29) ဘယ်အရာက ပိုရှက်စရာကောင်းနိုင်မလဲ။
ယေဇကျေလ ၃၇ တွင် ကျော်ကြားသော “အရိုးကွင်း” ရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည် ပရောဖက်အား ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ရူပါရုံကို ပေးတော်မူ၏။ ခြောက်သွေ့သောအရိုးများသည် "တုန်လှုပ်သောအသံ" ဖြင့်စုပြီး လူဖြစ်လာသည်။ ဤအရိုးများသည် ဣသရေလအမျိုး (ဖာရိရှဲများအပါအဝင်) အားလုံးဖြစ်ကြောင်း ပရောဖက်အား ပြောထားသည်။
အချင်းလူသား၊ ဤအရိုးတို့သည် ဣသရေလအမျိုး အပေါင်းတို့၊ ငါတို့၏အရိုးများ ခန်းခြောက်သွား၍ မြော်လင့်ခြင်းလည်း ပျောက်ပြီး ငါတို့၏အဆုံးသည် ဆုံးပြီဟု ဆိုကြသည် (ယေဇကျေလ ၃။7,11) ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က 'မင်းရဲ့သင်္ချိုင်းတွေကို ငါဖွင့်ပြီး ငါ့လူမျိုး၊ မင်းရဲ့သင်္ချိုင်းတွေကနေ မင်းကို ခေါ်ထုတ်ပြီး အစ္စရေးပြည်ထဲကို ပို့ဆောင်မယ်။ ငါ၏လူတို့၊ သင်၏သင်္ချိုင်းကိုဖွင့်၍ သင်္ချိုင်းတွင်းမှ သင့်ကိုဆောင်ခဲ့သောအခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို သင်တို့သိရလိမ့်မည်။ တဖန်အသက်ရှင်ရမည်အကြောင်း၊ သင်၏ပြည်၌ ငါအသက်ကိုသွင်း၍၊ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို သင်တို့သိရကြလိမ့်မည်။" (ယေဇကျေလ ၃း၃)7,12-14) ။
ဘုရားသခင်သည်အ ဦး ဆုံးဖြစ်သောနောက်ဆုံးသူများကိုအဘယ်ကြောင့်နေရာချသနည်း၊ ဘုရားသခင်သည်လူတိုင်းကိုပထမ ဦး ဆုံး၊ နောက်ဆုံး၊ သူကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုလိုလားသည်။ ဘုရားသခင်၏ထူးမြတ်လှသောကျေးဇူးတော်နှင့်စုံလင်သောအလိုတော်ကိုနှိမ့်ချစွာလက်ခံသူများသာအဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်နောင်တတရားကိုပေးနိုင်သည်။